Fifaninanam-panjakana : nandoavana kolikoly 40 tapitrisa Ar ny fidirana ho mpitsara - Informations et Actualités sur Madagascar
Société Fifaninanam-panjakana : nandoavana kolikoly 40 tapitrisa Ar ny fidirana ho mpitsara
Fifaninanam-panjakana : nandoavana kolikoly 40 tapitrisa Ar ny fidirana ho mpitsara
by Alpha world on 16 h 08 in Société
"Raha ny tao amin’ny Sekolim-pirenena famoahana mpitsara sy mpirakidraharaha (ENMG), raha ny famotorana nataon’ny Bianco: mahatratra 40 tapitrisa Ar any ho any no notakina tamin’ny olona te hiditra ao..."
Io no nambaran’ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis, tamin’ny mpanao gazety,
teny amin’ny minisiteran’ny Fitsarana, Faravohitra, omaly, momba ny fisian’ny kolikoly tamin’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny ENMG tamin’ny taon-dasa.
Nisy ny nandoa vola na kolikoly, nisy ny mahalala olona, araka ny fanazavany. Efa ao am-pamaranana ny famototrana momba izany ny Bianco. Halefa tsy ho ela eny amin’ny fitsarana ny raharaha.
Nisy ny lesoka tamin’ny fifaninanana
Be ny tsikera momba ny tsy fahamarinan’ny fifaninanana hiditra ao amin’ny ENMG tamin’ny taon-dasa, na nisy aza fifanaraham-piaraha-miasa nosianiavin’ny minisiteran’ny Fitsarana sy ny Bianco. Voamarina izany taty aoriana, fa misy ny mpifaninana tsy manana ny fahaizana takina aminy ka voaroaka.
Tsapa tamin’izany ny lesoka, tsy nahafahana niantoka ny fahamarinan’ny fifaninanana. Efa nisy fepetra raisina tsy hiverenan’izany. Tsy miaro fotsiny ny fifaninanana ny rafitra iadiana amin’ny kolikoly, fa miaro ny mpikarakara sy ny mpifaninana koa.
Mahaleo tena ny Bianco
Nohamafisin’ny tale jeneraly fa hambara amin’ny mpanao gazety izay manakantsakana ny Bianco amin’ny asany. Hahafahana miantoka ny fahaleovantenan’ny Bianco izany.
Rehefa ny olona ao anaty rafitra no tsy mahaleo tena amin’ny toe-tsaina, tsy hahomby na inona na inona lalàna apetraka. Na miankina amin’ny fiadidiana ny Repoblika aza ny rafitry ny Bianco, raha manatanteraka ny fahaleovantena andrasana aminy ny olona ao anaty rafitra: azo antoka ny fahaleovantena, araka ny fanazavany.
Vao hiditra ho mpiofana ho mpitsara dia manao kolikoly? Tsy mahagaga raha ny sehatry ny fitsarana no anisan’ny mahabe fitarainana indrindra momba ny raharaha kolikoly.
Vita sonia ny fifanarahana vaovao
Vita sonia ny fifanarahan’ny minisiteran’ny Fitsarana sy ny minisiteran’ny Asam-panjakana ary ny Bianco, teny amin’ny minisiteran’ny Fitsarana, Faravohitra, omaly. Izany dia momba ny fiarovana ny fahamarinan’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny ENMG sy ny Sekolim-pirenena famoahana mpandraharaha ny fonja (Enap).
Voarakitra amin’izany ny foto-kevi-dehibe tsy maintsy hajain’ny rehetra, ny antoka omen’ny tsirairay hahalavorary ny fifaninanana, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Fitsarana, Ramanantenasoa Noëline. Eo koa ny tatitra tsy maintsy atao, ny fomba arahina raha misy olana, ary ny fomba fampiharana ny fifanarahana.
By Alpha world at 16 h 08